Yako iPhone Yekhibhodi Isingashande? Heino chikonzero uye mhinduro! - Zvimwe
haugone kuchinja wifi pane iphone 4s
sei foni yangu iri kuenda kuvoicemail
sei kubatanidza iphone yangu kumota yangu
sei iphone yangu ichiti inotsvaga
Yako iPhone keyboard haisi kushanda nemazvo uye hauzive nei. Uri kuyedza kunyora meseji kana katsamba, asi iyo keyboard haina kubatana. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura kwauri nei yako iPhone keyboard isiri kushanda uye ini ndinokuratidza maitiro ekugadzirisa dambudziko .
Nei Yangu iPhone Yekhibhodi Isingashande?
IPhone keyboards kazhinji anomira kushanda nekuda kwechimwe chezvikonzero zvitatu:
Iko kunyorera kwauri kuyedza kushandisa iyo iPhone keyboard mukati kwave kudonha.
IPhone yako iri kusangana nechinetso chemberi che software.
Yako iPhone skrini haisi kushanda nemazvo kana haisi kupindura.
Matanho pazasi achakubatsira kuti uone chaizvo zvakakonzera kuti yako iPhone keyboard irege kushanda uye kukuratidza maitiro ekugadzirisa dambudziko.
Chenesa Yako iPhone Screen
Yako keyboard inogona kusashanda kana iyo skrini yakasviba. Kazhinji nguva iyi tsvina ichave chikafu chinosara - iwe unodya chimwe chinhu nemaoko ako wozobata yako iPhone. Paunotanga kushandisa yako iPhone, zvimwe zvekudya iwe zvawanga uchidya zvimiti kuchikona, uchinyengedza iPhone yako kuti ifunge kuti uri kubata iyo skrini.
Dzimwe nguva izvi zvinogona kuita kuti keyboard yako ipenge uye kunyangwe 'nyora mavara ari ega'. Tora microfiber jira uye pukuta pazasi peyako iPhone skrini pane iyo keyboard inoonekwa. Kana iwe usina microfiber jira, tinokurudzira iyo 6-kurongedza Progo paAmazon .
Kana tsvina iri pachiratidziri chako ichiomesa musoro, ungangoda kushandisa yekuchenesa fluid. Nekudaro, iwe unofanirwa kuve wakangwarira apa: mazhinji anozivikanwa ekuchenesa mapiritsi ane zvigadzirwa izvo zvinogona kukuvadza kune yako iPhone skrini.
Apple inoyambira pamusoro pekushandisa kuchenesa zvinwiwa zvakadai segirazi rinochenesa, kupuruzira, kuchenesa dzimba, mabrasives, ammonia, solvents, kana chero chinhu chine hydrogen peroxide kana acetone.
Sezvaunogona kufungidzira, zvingave zvakaoma kuwana chigadzirwa chemvura yekuchenesa chisina chero izvi zvigadzirwa. Neraki, isu takawana imwe yako - iyo GreatShield inobata skrini yekuchenesa kit . Iyi kit inouyawo ne microfiber jira uye maviri-mativi ekuchenesa chishandiso, kuti iwe ugone kutarisa zvinhu zvitatu kubva pane yako yekutenga rondedzero!
Vhara Zvese Zvako Zvishandiso
Heino mubvunzo wakakosha kuti uzvibvunze wega - ko iyo keyboard keyboard haisi kushanda mune chero eemaapps ako kana iri dambudziko riri kungoitika mune imwe yeemaapps ako?
Kana iyo keyboard ikasashanda mune chero eemaapp ako, zviri zvishoma kuti imwe chaiyo app iri kukonzera dambudziko. Kana iyo keyboard isiri kushanda mune imwechete application, pane mukana wakanaka wekuti iko kunyorera kuri kupaza, kuri kukonzera dambudziko.
iphone inoti kuchaja kwayo asi wont kuchaja
Pasinei nemamiriro ezvinhu aunozviwana uri, vhara zvese zvinoshandiswa pane yako iPhone . Nenzira iyi, tinogona kuva nechokwadi chekuti kukundikana kwechikumbiro hakusi iko kwakakonzera kuti keyboard ye iPhone yako imire kushanda.
Kuti uvhare maapplication ako, vhura iyo launcher yeapps nekudzvanya-bhatani reKumba bhatani (iPhone 8 uye nekumberi) kana nekutsvaira kumusoro kubva pasi pechidzitiro kusvika pakati pechidzitiro (iPhone X). Wobva wasvaira maapplication ako kumusoro uye kubvisa pamusoro pechiso. Iwe unozoziva kuti ako ese maapplication akavharwa kana pasina chinowoneka musarudzo yekushandisa.
Kunyangwe iwe wakavhara ese maapplication pane yako iPhone, yako iPhone keyboard inogona kusashanda nekuda kwediki software software. Kutangazve yako iPhone kunogona kugadzirisa madiki masoftware matambudziko sezvo inobvumira ese mapurogiramu anomhanya pane yako iPhone kuvhara zvoga.
Kudzima yako iPhone, tinya uye bata bhatani remagetsi, wobva watsvedza red icon icon kuburikidza nemazwi Rova zvakasimba kudzima . Kana uine iPhone X, tinya uye bata bhatani rerutivi uye vhoriyamu pasi bhatani, wobva wadzima yako iPhone nekutsvedza iyo simba icon kubva kuruboshwe kurudyi.
Kudzorera yako iPhone kumashure, pinda uye bata bhatani repadivi (iPhone X) kana bhatani remagetsi (iPhone 8 kana kumberi) kusvikira iyo logo yeApple yaonekwa pachiratidziri.
Isu tinowanzo taura kuKugadzirisazve Zvirongwa se 'mashiripiti bara' nekuti ine mukana wekugadzirisa zvinetswa zve software izvo zvingadai zvichinetsa kugadzirisa. Uku kumisazve kunodzosera zvese zviri muZvirongwa app kune zvisizvo zvefekitori.
Iwe uchafanirwa kuisa zvakare yako Wi-Fi mapassword, kumisikidza yako Wallpaper zvakare, uye kubatanidzazve kune ako eBluetooth zvishandiso, asi zvakakosha kuti uwane yako iPhone keyboard kushanda zvakare.
nei wont yangu iphone yekuvandudza maapplication
Kuti umutsiridze zvigadziriso pane yako iPhone, enda kuZvirongwa -> General -> Seta uye ubate Hola . Pinda password yako ye iPhone, wobva wadzvanya Hola kusimbisa.
DFU kudzoreredza yako iPhone
Kana Kugadzirisazve Zvirongwa zvisina kushanda kugadzirisa yako iPhone khibhodi nyaya, inguva yeku isa yako iPhone muDFU modhi uye udzorere. Uku kudzoreredza kuchabvisa uye kurodha patsva mutsetse wega wekodhi pane yako iPhone. Kana iko kudzoreredza kwapera, zvinoita sekunge uri kutora yako iPhone kunze kwebhokisi rayo kekutanga.
Usati waisa yako iPhone muDFU modhi, ini ndinokurudzira zvikuru chengetedza backup ye data rako rese neruzivo. Nenzira iyoyo, unogona kupora zvese kubva kune backup uye hauzorasikirwa nemifananidzo yako, mavhidhiyo, uye nezvimwe.
Dzvanya Pasi Pane Yako iPhone YeMamaboardboard
Kuwana iyi nhanho yekushanda ipfuti refu, asi zvakakodzera kuyedza kana uchikwanisa kuzvichengetera rwendo kuenda kuApple Chitoro. Kana yako iPhone keyboard ikamira kushanda gare gare Sezvo yakadonhedzwa pane yakaoma nzvimbo, zvinokwanisika kuti tambo diki dziri mukati me iPhone yako dzinobatanidza mamaboard / mamaboard kuchiratidziro dzabuda. Kana vakabuda, iyo skrini inogona kumira kupindura.
Iyo mamaboard / mamaboardboard nzvimbo ichasiyana zvichienderana neiyo iPhone modhi yaunayo. Tinokurudzira kuenda iFixit uye tarisa kumusoro kweye teardown gwara kune yako iPhone modhi kuti uwane kuti iro mama bhodhi iri kupi.
Paunenge iwe wawana iyo mamaboard, tinya zvakananga pairi. Iwe uchafanirwa kudzvanya zvakanyanya, asi chenjera kuti usamanikidza zvakare , nekuti unomhanyisa njodzi yekutyora sikirini. Nekudaro, kana skrini yako isisiri kupindura, panogona kunge pasina chakasara kurasikirwa.
Kana DFU kudzoreredza isina kugadzirisa yako iPhone keyboard, tinogona kutonga kunze mukana wekuti chikonzero chiri chinetso che software. Ino ndiyo nguva yekukurukura zvaunogona kugadzirisa.
Kukuvara kwemvura, kutsemuka masikirini, kana kudonhedza netsaona kunogona kukonzera iyo yako iPhone skrini inomira kushanda . Kana iyo skrini isiri kushanda, iwe uchave nenguva yakaoma yekuita kunyange zvakapusa mabasa pane yako iPhone, sekuvhura maapplication kana typing pane iyo keyboard.
batidza iphone ine bhatani remagetsi rakatyoka
Kana yako iPhone yakavharwa neAppleCare +, enda kune yako Apple Store woitarisa nehunyanzvi. Isu tinokurudzirawo Pulse , in-demand yekugadzirisa kambani iyo inotumira anozivikanwa tekinoroji chaipo chaipo kwauri.
Iwe une kiyi
Yako iPhone keyboard iri kushanda zvakare uye iwe unogona kuteedzera meseji, maemail, uye manotsi. Inotevera nguva yako iPhone keyboard iri pasi, iwe unoziva kwekuenda kugadzirisa dambudziko. Ndizivisei nhanho yakamisa yako iPhone nekusiya mhinduro pazasi!